किर्तिमानी जलपरी गौरिका सिहं भन्छिन् : ‘म नेपाली नै हुँ, म नेपालकै लागि खेल्छु’ |
२०७७, १३ पुष सोमबार १२:३४ December 28, 2020 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद चलिरहेका बेला गौरिका सिंहले भावविह्वल भएर ‘म नेपाली नै हुँ, म नेपालकै लागि खेल्छु’ यस्तैयस्तै भनेकी थिइन, यस्तो किन पो भन्नुपरेको थियो होला त ? सार खिच्दा यसले नेपाली खेलकुदमा नयाँ मानक भने तयार हुन्छ । विदेशी भूमिमा प्रशिक्षण लिँदै, अभ्यास गर्दै कोही अब्बल हुन्छ र उसले नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्न किन कन्ज्युस्याइँ ?
कसैले तिनलाई कहाँ नेपाली होइन भन्न पाइन्छ र ? बरु उनले पाएको उपलब्धीमा खुसी भएर मन ठूलो पार्दा राम्रो । धन्य, गौरिकाले यस्तो फरक बाटो त खोलिदिएकी छन् । लन्डनमा बस्छिन्, पौडी खेल्छिन्, अनि नेपालको प्रतिधिनित्व गर्छिन्, त्यो पनि गौरवले । वर्ष २०७६ मा नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अवसर केही हो भने त्यो १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नै हो । अनि यसको पनि सबैभन्दा ठूलो केही नेपाली उपलब्धि छ भने त्यो गौरिकाले जितेको चार स्वर्ण नै हो ।
उनले नेपाली खेलकुद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सवमा चार स्वर्ण मात्र जितिनन्, दुई रजत र तीन कांस्य पनि जितिन् । अनि सबैको मन पनि । त्यसो त उनको यही प्रदर्शनमा खोट लगाउने पनि रहे । अनि त्यसैकै उत्तरमा त हो, गौरिकाले भनेकी, ‘म नेपाली नै हुँ म नेपालकै लागि खेल्छु ।’ अब त कसैले औंला भाँचेर नेपाली खेलकुदका सबैभन्दा सफल खेलाडीको सूची बनाउँछ भने त्यसमा पक्कै गौरिकाको नाम पक्कै हुनेछ । त्यसैले त नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुन लागेको वर्ष २०७६ को पल्सर स्पोर्टस अवार्डको लोकप्रिय खेलाडी विधामा उनको नाम पनि मनोनयन भएको छ ।
उनी यसका लागि हकदार त छिन् नै, अवार्ड जित्नका लागि बलिया प्रत्यासी पनि छिन् । हुन पनि पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदबाट धेरैले चिनेको अनुहारमा पर्छ, गौरिका । यसको पृष्ठभूमि तयार हुन सुरु भएको भने चार वर्ष अगाडिदेखि नै हो । हुन त त्यसको पनि अगाडि फुच्ची गौरिकाले नेपाली घरेलु पौडीमा तहल्का मच्चाइसकेकी थिइन् । तर, उनको सबैभन्दा पहिले बलियो उल्लेखनीय प्रदर्शन सन् २०१६ मा भएको थियो, भारतमा भएको १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ।
गुवाहटीमा उनले नेपालका लागि एक रजत र तीन कांस्य जितिन् । उनले जितेको त्यो रजत नेपाली पौडीमा हकले जितेको पहिलो ठूलो उपलब्धि रह्यो । त्यसपछि त्यही वर्ष ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा त उनले तहल्का नै मच्चाइन् । विश्व खेलकुदको महाकुम्भमा गौरिका नै सहभागी हुने सबैभन्दा कान्छी खेलाडी थिइन् । उनको चर्चा चारैतर्फ रह्यो । भन्न कर लाग्छ, यत्तिको विश्वब्यापी चर्चा यसअघि अरू कोही नेपाली खेलाडीले कहिले पनि हासिल गरेकै थिएन् । घरेलु प्रतियोगितामा उनले सहभािगता लिएको सबै स्पर्धामा स्वर्ण जितिन् ।
नेपालगन्जमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले १२ वटा स्वर्णपदक जित्दै सागको लागि तयार रहेको संकेत दिइन् । पछिल्लो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा त उनले झन् पो गज्जब गरिन्, चार स्वर्णको उपलब्धिसँगै । अब त गौरिकाबारे मज्जाले भन्न सकिन्छ, उनी फगत चर्चामा मात्र रहिनन्, उनले आफूलाई सिद्ध पनि गरेकी छन् । झन् अब यिनै १८ वर्षीया गौरिकालाई धेरै भन्दा धेरै मत दिएर लोकप्रिय विधामा जिताउने काम तपाईंहरूको । राजधानी दैनिकबाट
२०७७, ५ पुष आईतवार ०९:४४